Somalia oo ka dhex faa’iidaysatey dagaalka ganacsi ee Maraykanka & Shiinaha (Arag jaantuska) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Somalia oo ka dhex faa’iidaysatey dagaalka ganacsi ee Maraykanka & Shiinaha (Arag...
Somalia oo ka dhex faa’iidaysatey dagaalka ganacsi ee Maraykanka & Shiinaha (Arag jaantuska)
(Hadalsame) 05 Agoosto 2019 – Dagaalka Ganacsi ee Ameerika – Shiinaha iyo Sida uu u Saamaynayo Ganacsiga Soomaaliya
“Dagaal oo dhan waa dagaal dhaqaale” sida dagaalka ganacsi ee u dhaxeeya Ameerika iyo Shiinaha (waa Jamhuuriyadda Dadweynaha ee Shiinaha).
Waxay la noqotay MW Donald Trump in ay dalkiisa ku tahay cadaalad darro ganacsiga u dhaxeeya Ameerika iyo Shiinaha.
Sida ku cad shaxda 1aad ee hoos ka muuqata, dalka Shiinaha ayaa u dhoofiyay Ameerika badeeca kala duwan oo guud ahaan qiimahoodu yahay $539.50 billion sanadki 2018.
Ameerikana waxay u dhoofisay dalka Shiinaha badeeca dhan $120.30 billion sanadki 2018. Fiiri Shaxda 1aad.
MW Trump ayaa qaatay go’aan ah in la dul saaro badeecada laga keeno Shiinaha canshuur dhan 25% sanadki 2017 (iyo 10% kale asbuucan) si ay u yareeyaan farqiga ganacsi ($419.20 billion) ee u dhaxeeya labda dal ama si la isugu dheelitiro ganacsiga Ameerika iyo Shiinaha iyo in lagu qasbo dalka Shiinaha in uu kordhiyo soo iibsashada badeecada dalka Ameerika.
Si la mid ah tallaabada uu qaaday dalka Ameerika, ayaa dalka Shiinuhuna canshuur dul saaray badeecada uga timaada Ameerika.
Si dadban ayay uga faa’iideen ganacsatada Soomaalidu dagaalka dhaqaale ee u dhaxeeya Ameerika iyo Shiinaha.
Canshuurta Ameerika waxay qaali ka dhigtay badeecada uu Shiinuhu u dhoofiyo dalkaas. Si ay u dhinto waxyeelada canshuurta, dalku Shiinuhu wuxuu hoos u dhigay sarifka lacagtooda. Fiiri Shaxda 2aad, USD / CNY
Sida ku cad shaxda 2aad, shan sano ka hor (Agoosto 4, 2014), sarifka halki Doolar (USD/CNY) wuxuu ahaa 6.18 Yuwaan (RMB). Hadda halki Doolar waa 6.94 Yuwaan.
Taas waxay tilmaamaysaa in qiimaha Yuwaanku (CNY) uu hoos u dhacday 12.30% shan sano gudaheed.
Dhinaca kale, dowladda Shiinaha ayaa xoogga saartay sidii ay suuqyo cusub ugu heli lahayd badeecadaha kala duwan oo ay dhoofiso si ay u yareyso waxyeelada dhaqaale ee ka soo gaari doonta dagaalka ganacsi ee kala dhaxeeya Ameerika.
Sida ku cad shaxda 3aad iyo tan 4aad, sarifka Yuwaanka Shiinaha (USD/CNY), Liiraha Turkiga (USD/TRY) iyo Rubiiga Hindiya (USD/INR) hoos ayay u dhaceen shanti sano ee la soo dhaafay. Liiraha Turkiga wuxuu hoos u dhacay 159.26%; Rubiiga Hindiyana wuxuu hoos u dhacay 9.22%; Yuwaanka Shiinahana 12.30%.
Inkasta oo dowladdu bilowday in ay ganacsatada badeecadaha qaarkood ka qaado 5% canshuurta iibka (5% Sales Tax), ganacsade aan la sheekeystay wuxuu ii sheegay in mushaarka la siiyo shaqaalaha dukaamada, bakhaarada, iyo xafiisyada ganacsatada Soomaaliyeed aysan kordhin ama waxyar ku kordheen shanti sano ee la soo dhaafay.
Waxaa ii muuqata in ganacsi badan ay la wareegi doonaan shirkado ajnabi ah shanta sano ee soo socota.
Wa Allahu Aclam,
Waxaa Diyaariyay: Ustaad Ismaaciil Cali Saciid
Previous articleNAF-HURID: Dhacdo qalbiga taabanaysa oo uu ka qiseeyay maadyahankii Charlie Chaplin!!
Next articleDAAWO: ”In Xisbiga Waddani ”Soomaaliwayn” lagu tilmaamo yay wax u dhimaysaa?!!” – Xisbiga Waddani oo furka xooray!